Ukubuka konke kohlelo lokusebenza - Izindwangu ze-Sublimation (Izingubo zezemidlalo) - iMimoWork
Ukubuka konke kohlelo lokusebenza - Izindwangu ze-Sublimation (Izingubo zemidlalo)
Laser Cutting Sublimation Izindwangu (zemidlalo)
Kungani Kufanele Laser Inqubo Sublimation Izindwangu
Isitayela esenziwe ngengubo yokugqoka sesiyinto evumelana nokunakwa ngumphakathi, futhi kunjalo nangabakhiqizi bezingubo. Okwezingubo ezisebenzayo, ama-leggings, ukugqoka amabhayisikili, amajezi, izingubo zokubhukuda, izingubo ze-yoga, nokugqoka imfashini, ukuphishekela okuphezulu emisebenzini nekhwalithi kubeka phambili imfuneko eqinile yendlela yokucubungula ubuchwepheshe bokuphrinta be-sublimation. Ukukhiqizwa okudingeka kakhulu, iphethini yokuklama eguqukayo nesitayela, nesikhathi esifushane sokuhola esingatholakala ngobuchwepheshe bokucubungula i-laser, ngokungangabazeki kunquma inzuzo yamanje yokukhiqiza. Kodwa-ke, izinzuzo ze-laser zingaphezulu kakhulu kwalezi.
Ekusekelweni kokuqashelwa kwentaba kanye nohlelo lwe-CNC, ikhwalithi ephezulu nokusebenza kahle kakhulu kungaba khona ngasikhathi sinye ekusetshenzisweni kwe-laser. Amaphethini aphrintiwe anganqunywa ngokunembile nge-laser cutter, ikakhulukazi kuma-engeli we-obtuse nokusika kwejika. Ukunemba okuphezulu nokuzenzekelayo yizakhiwo zekhwalithi ephezulu. Okubaluleke kakhulu, ukusika okusika kwendabuko kulahlekelwa ijubane nokukhipha inzuzo ngenxa yokusika kwe-monolayer okunqunywe yizindwangu zokuphrinta ze-sublimation, kuyilapho i-laser cutter ivele ibambe iqhaza elibalulekile ekusizeni ijubane nokuzivumelanisa nezimo ngenxa yamaphethini angenamkhawulo nokugoqa ukugoqa impahla, ukucubungula, ukwamukela. Lokho konga kakhulu isikhala futhi kufanelekile ekukhiqizeni ngobuningi nangokuncane. Ngakho, laser ahlabayo inobungane ngempela futhi efanelekayo Sublimation isembatho ahlabayo futhi perforating.
Izinzuzo ezivela ku-Laser Cutting Sublimation Apparel
✔ Unqenqema olubushelelezi futhi oluhlelekile
✔ Imvelo yokuhlanza ehlanzekile futhi engenalo uthuli
✔ Ukucubungula okuguqukayo kwezinhlobo eziningi nobubunjwa
✔ Akunamabala nokuhlanekezelwa kwempahla
✔ Ukulawulwa kwedijithali kuqinisekisa ukucubungula okunembile
✔ Ukusika okuhle kusindisa izindleko zezinto zokwakha
Izicelo ezihlobene nezinto zokwakha
Izicelo - Ukugqoka okusebenzayo, amaLeggings, ukugqoka ngebhayisikili, amaJesi weHockey, amajezi e-Baseball, amajezi e-Basketball, amajezi ebhola lezinyawo, amajezi e-Volleyball, amajezi we-Lacrosse, ama-Ringette Jerseys, ama-Swimwear, izingubo ze-Yoga
Izinto zokwakha - Polyester, Polyamide, Non-ephothwe, izindwangu wathungela, Polyester Spandex
Ukukhonjiswa kwe-MimoWork Sublimation Apparel Laser Cutter
Thola amavidiyo amaningi mayelana nabasiki bethu be-laser ku Igalari Yevidiyo
Incomo yeMimoWork Laser Cutter
Umshini we-contour laser cutting ufakwe i-HD Camera ngaphezulu komshini, ikhamera d ...
Inani elingeziwe ngezinketho ze-Mimo
- Iphethini enembile ukusika nge Uhlelo Lokuqashelwa Kwe-Contour
- Okuqhubekayo ukuzondla ngokuzenzakalela nokucubungula ngokusebenzisa Ithebula lokuhambisa